Mali waa inay dib ugu laabataa dowladnimo dimoqraadi ah
Dawladda Maraykanka ayaa codkeeda ku biirinaysa bulshada caalamka, kuwaas oo dawladda Mali ugu baaqaya in jadwal loo qabto sameynta dawlad si dimoqraadi ah loo soo doorto. Taasi waxay ahayd farriin uu Kusimaha Arrimaha Siyaasadda ee Gaarka ah ee Maraykanka, Jeffrey DeLaurentis uu ka sheegay Golaha Ammaanka ee QM, mar dhawaan arrintan laga hadlayey.
Marka lagu daro khatarta amni ee muwaadiniinta Mali ay kala kulmayaan ururada Al-Qaida iyo IS, dalka waxaa waxyeello weyn u geystay degenaansho la’aan siyaasadeed, sida afgambi, kaas oo muddo 9 bilood gudahdood ah ka meesaha kaga saaray hogaamiyeyaashii rayidka ee kmg ahaa.
Bishii August ee sanadkii hore, Colonel Assimi Goita ayaa hor kacay afgambi meesha ka saaray hogaamiyihii sida dimoqraadiga ah loo soo doortay. Ka dib cadaadis kaga yimid Ururka Dalalka Galbeedka Afrika ee ECOWAS, dawlad kmg ah ayaa la sameeyey, iyada oo xilka ra’iisal wasaaraha iyo ka madaxweynaha la abuuray. Colonel Goita waxa muddadii 9ka bilood uu aheyd ahaa madaxweyne kuxigeen. 24ka bishii May, waxa uu xiray, xilkana ka tuuray hogaamiyeyaashii madaniga ahaa. Maalno ka dib, maxkamadda dastuuriga ah ee Mali ayaa isaga u magacowday madaxweynaha KMG ah. 9ka bishii June, Colonel Goita ayaa ra’iisal wasaare u magacaabay Choguel Kokalla Maiga oo ah nin rayid ah, horayna madax uga soo noqday ururka Patriotic Movement for Renewal.
Dawladda Maraykanka iyo dalalka kale ee bulshada caalamka ayaa ku baaqay sii-deynta dadka xabsiga la dhigay iyo kuwa guryahooda lagu xiray. Danjiraha Maraykanka DeLaurentis ayaa sheeegay in xiridda madaxdan uu yahay “weerar toos ah oo loo geysanayo hanaanka kmg ah ee dalka ee dib loogu noqonayo dimoqraadiyadda iyo isku-maamulka sharciga.”
Intaas waxa dheer, in dawladda ay dadka rayidka hogaaminayaan ay keenayaso fursadaha ugu wanaagsan ee amni iyo barwaaqo lagu gaari karo, iyo waliba ay horseedayaso qabashada doorashooyinkii qorsheysaa ee bisha February, 2022.
Danjire DeLaurentis ayaa yiri” Waxaan eegi doonaa tallaabooyin siyaasado arrimaha dibadda ah oo lala tiigsan doono fal kasta oo lagu carqaladeynayo hanaanka lagu gaarayo dawlad la soo doorto”.
Danjire DeLaurentis ayaa intaas ku daray “ Waxaan si adaga u garab is taagaynaa dadka reer Mali, u hanqal taagooda dimoqraadiyad, nabad, horumar, iyo qadarinta xuquuqa aadamaha.”